တရုတ်နိုင်ငံက ကမ္ဘာမြေလေ့လာရေးဂြိုဟ်တုအသစ် လွှတ်တင် - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း ကျိုးချွမ် ဂြိုဟ်တုလွှတ်တင်ရေးစင်တာမှ Gaofen-3 02 အား Long March-4C သယ်ဆောင်ရေးဒုံးပျံဖြင့် နိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက်ကလွှတ်တင်နေသည်ကို တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ကျိုးချွမ်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း ကျိုးချွမ်ဂြိုဟ်တုလွှတ်တင်ရေးစင်တာမှ ကမ္ဘာမြေလေ့လာရေး ဂြိုဟ်တုအသစ်တစ်စင်းအား နိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက်၌ လွှတ်တင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Gaofen-3 02 အမည်ရှိသော ဂြိုဟ်တုအား ပေကျင်းစံတော်ချိန် နံနက် ၇:၄၅ နာရီက Long March-4C ဂြိုဟ်တုလွှတ်တင်ရေးဒုံးပျံဖြင့် လွှတ်တင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ စီစဉ်ထားသော ဂြိုဟ်ပတ်လမ်းကြောင်းအတွင်းသို့ အောင်မြင်စွာဝင်ရောက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ဂြိုဟ်တုသည် solar synchronous ဂြိုဟ်ပတ်လမ်းကြောင်းတွင် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ၇၅၅ ကီလိုမီတာတွင် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မည်ဖြစ်ပြီး ကုန်း-ပင်လယ်ရေဒါဂြိုဟ်တုအစုအဖွဲ့တစ်ခုဖွဲ့စည်းရန် Gaofen-3 ဂြိုဟ်တု ဂြိုဟ်ပတ်လမ်းကြောင်းပတ်ခြင်းဖြင့် ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းဂြိုဟ်တုသည် ပင်လယ်ရေကြောင်းသင်္ဘော စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းများ၏ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုစောင့်ကြည့်ခြင်းအပြင် ပင်လယ်နှင့် ကုန်း-ပင်လယ် သဘာပတ်ဝန်းကျင် အရေးပေါ်အခြေအနေများစောင့်ကြည့်ခြင်းကို တိုးမြှင့်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
၎င်းဂြိုဟ်တုသည် ပင်လယ်ရေကြောင်း သဘာဝဘေးအန္တရယ် ကာကွယ်ရေးနှင့် လျော့ပါးရေး၊ ရွေ့လျားနိုင်သော ပင်လယ်ရေကြောင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စောင့်ကြည့်ရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကာကွယ်ရေး၊ ရေကြောင်းထိန်းသိမ်းရေး၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် မိုးလေဝသ စသည့်နယ်ပယ်များ၌ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Gaofen-3 02 ဂြိုဟ်တုအား တရုတ်နိုင်ငံ အာကာသနည်းပညာအကယ်ဒမီမှ ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး သယ်ဆောင်ရေးဒုံးပျံအား အာကာသယာဉ်ပျံသန်းရေးနည်းပညာဆိုင်ရာ ရှန်ဟိုင်းအကယ်ဒမီမှ ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ဂြိုဟ်တုလွှတ်တင်ခြင်းသည် Long March သယ်ဆောင်ရေးဒုံးပျံစီးရီး၏ ၃၉၈ ကြိမ်မြောက် လွှတ်တင်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Source: Xinhua| 2021-11-23 09:04:43|Editor: huaxia
JIUQUAN, Nov. 23 (Xinhua) — China launchedanew Earth-observation satellite from the Jiuquan Satellite Launch Center in northwest China on Tuesday.
The launch marks the 398th mission for the Long March series carrier rockets. Enditem
Photo : 1, 2,3-A Long March-4C rocket carrying the satellite Gaofen-3 02 blasts off from the Jiuquan Satellite Launch Center in northwest China, Nov. 23, 2021. The new Earth-observation satellite was launched at 7:45 a.m. (Beijing Time) and has entered the planned orbit successfully. (Photo by Wang Jiangbo/Xinhua)